Fanafihan-jiolahy: Iray namoy ny ainy, roa hafa naratra mafy taty Ambatondrazaka
mardi, 26 septembre 2017 22:44
Mpandraharaha iray mpanao mofo dipaina ao Tanambao, Fokontany Ambohimasina no notafihin’ny asan-jiolahy tao an-toeram-piasana ny alin’ny alahady 24 septambra teo.
Voafira antsy sady voadaroka ireo mpiasa sendra ireo jiolahy tao, nentin’ireto farany nanerena ireo mpiasa hanoro ny toerana misy ny mpampiasa azy ireo. Noho ny tahotra dia nanoro ny toerana misy azy ireo mpiasa.
Vao nanokatra ny varavarana tao ambony rihana ny tovolahy iray zanak’ilay mpampiasa dia notifirin’ireo olon-dratsy avy hatrany ka voa teo amin’ny tratrany.
Raha nandre ny poa-basy ny tompon’ilay fanaova-mofo dia nanao izay hampandosirana ireo vady aman-janany hanavotana ny ain’izy ireo. Nony tafavoaka ireto farany dia nitsoka kiririoka nanaitra ny manodidina. Vaky nandositra ireo jiolahy vao nahita ny firodorodon’ny Fokonolona.
Taorian’izay vao afaka nentina teny amin’ny hopitaliben’Ambatondrazaka ireo naratra rehetra. Na teo aza ny ezaka nataon’ny mpitsabo dia namoy ny ainy ilay tovolahy voatifitra teo amin’ny tratrany. Ilay voafira antsy sy voatifitra teo amin’ny masony kosa dia mbola manohy ny fitsaboana.